ယောက်ျားတွေကမိန်းကလေးတွေကိုရိုက်နှက်တာကိုရယ်စရာကောင်းသောနည်းဗျူဟာများ - နှုန်းထားများ
ငါတို့ရှိသမျှသည်မိန်းကလေးများကောက်ဖို့ရုန်းကန်ယောက်ျားတွေမြင်ကြပါတယ်။ တချို့ကဒါချစ်စရာကောင်းပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လို့သင်တောင်မှအဲဒါကိုမသိဘူး။ တချို့ကျတော့အရည်အချင်းမရှိဘူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမနှစ်တစ်နှစ်ကရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးစည်းညီညွတ်တဲ့အိမ်အပြင်ဘက်ကလူအုပ်ကြီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါ၊ သာမန်ပုံပေါက်နေသောယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခြံစည်းရိုးဘေးမှာရပ်နေတဲ့ကျွန်တော့်အခန်းဖော်ကိုသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သတိထားမိသည်မှာယောက်ျားများထဲမှသြစတြေးလျသံcentာအတုအယောင်အတုအယောင်အတုအယောင်အတုအယောင်အတုများဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏အခန်းဖော်အဖော်၏စင်ကြယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခြေအနေဖြစ်သည်။
ငါ '90 ကနေဘန်းစကားများအသုံးပြုသော်လည်း, ငါ၏အဆွေသည်ဤယောက်ျားတွေအမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်ကြောင်းလုံးဝမယုံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမကသူတို့ကိုဆက်ပြီးယုံကြည်လာသောအခါကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်မိသည်။ သူတို့တိုင်းပြည်အကြောင်းမသိသောကြောင့်သူတို့ကိုငါထောက်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်တွင်သူတို့ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှအသံထွက်ရှိအခြားမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေသည့်ထောင့်တစ်နေရာ၌ကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများကိုဤအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပြပြီးမိန်းကလေးများကိုရွေးရန်တစ်ချိန်ချိန်သို့မဟုတ်အခြားအချိန်၌အတုအယောင်အတုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဝန်ခံသောအခါအလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ငါလာမယ့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့ကောင်းသောအသံထွက်ကြိုက်ပေမယ့်ယောက်ျားတွေသူတို့အားလုံးအင်္ဂလန်သို့မဟုတ်သြစတြေးလျကနေပြည်ပမှာလေ့လာမရနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လျှင်ငါတွေးမိပါဘူး။
ဂန္ထဝင်မဟုတ်သောသူတို့သည်သူတို့ puns ဖြစ်ကြသည်ထင်သကဲ့သို့ရယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး
တစ်ချိန်က Valentine Day တွင်ဘောလုံးကစားသမားတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားနစ်ခ်ဆဘန်၏ပုံတစ်ပုံကိုပို့လိုက်ပြီး 'ငါမင်းကိုချစ်တာပါပဲ။
ငါနောက်ဆုံးဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်ကိုပြသခဲ့သည်။ လူတစ်ယောက်ကငါ့ဆီလာပြီး 'မင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများကိုပြမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့သွေးတစ်ဝက်မင်းသားဖြစ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်' ဟုပြောနေသည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ တုံ့ပြန်ရန်
ဤသည်အသုံးအများဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလိုင်းများသည်လူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်သူ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည်) တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ရယ်စရာကောင်းပြီးအနည်းငယ်အသိဉာဏ်ရှိသူအချို့ကိုပြသသောကြောင့်၎င်းကိုဖော်ပြရန်ကျိုးကြောင်းသင့်သည် - သို့မဟုတ်သူသည်အင်တာနက်သွားလာရန်အလွန်ကောင်းသည်။
ဗီဒီယိုရေဒီယိုကြယ်ပွင့် memes ဦး သေဆုံးခဲ့သည်
ငါတို့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားရှိတဲ့အိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာနေကြတယ်။ ဆိတ်သငယ်တစ်ယောက်က 'ဂျိန်းစမစ်' လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသွားလိုက်တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူသည်မိမိပိုက်ဆံအိတ်သို့ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးသွားသော ID ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ သုံးလအကြာ။
ကိုယ့် 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်?' ဟုပြောသည်သူနှင့်အတူတုန့်ပြန် '' ဟုတ်, ဒါ ... ကဘာလဲဆိုတာကခုန်? 'ထိုအခါငါမကပြောသည်။ ပုံသည်ကလေးငယ်သည်သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသုံးလကြာသယ်ဆောင်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်မဟုတ်ဘဲ - သူက 'သူကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်ကိုပေးသည်' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် Facebook ကိုနောက်ယောင်ခံအတွက်အပြစ်ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကဒီလောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။
တစ်ချိန်ကအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကျွန်တော့်ကောင်လေးကဒီပွဲမှာဒီမိန်းကလေးရှိခဲ့ဖူးတဲ့ယုန်နဲ့ကစားချင်သလားလို့မေးခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါ '' သေချာ။ 'ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်
သို့သော်ထိုမိန်းကလေး၏တံခါးသည်ကျိုးပဲ့ခဲ့သဖြင့်သင်ကအားလုံးကိုပိတ်ထားလျှင်၎င်းသည်သော့ခတ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်သင်တန်းသူကအားလုံးကိုလမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ထွက်ပေါက်မရနိုင်တဲ့အခါသူက '' ကောင်းပြီ ... ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ '
တစ်ခါတုန်းကဂျာစီပါတီပွဲမှာငါတက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးငါဝတ်ထားတဲ့ဂျာစီကိုကြည့်ဖို့ကျွန်မရဲ့ဆံပင်ကိုလှီးတယ်။ ထို့နောက်သူကဟုတ်ကဲ့, ပြုပါလိမ့်မယ်, ငါ့လက်ကိုဖမ်းပြီးသူ၏အခန်းသို့ငါ့ကိုယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းပြန်တုန်းကငါပီဇာဖြန့်ဝေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါပီဇာမိန့်မှာရန်ကတိပြုဖို့တောင်းချင်မိန်းကလေးယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ငါအပ်သောပီဇာ box ထဲမှာ '' Prom? '' ရေးသားခဲ့သည်။
ငါတကယ်အရူးဘာမှမလုပ်ကြဘူး။ ငါတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သည်အထိသူတို့ကို shit outta ချီးမွမ်း။
ကိုယ့် 'သင်တော်တော်လေး' လို့ပြောပြီးအကောင်းဆုံးအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။